बिहिबार २८ पुस / जनवरी १२ को राशिफल सबैको दिन शुभ मंगल रहोस – ekoshi.com
बिहिबार २८ पुस / जनवरी १२ को राशिफल सबैको दिन शुभ मंगल रहोस
आजको राशिफल – वि.सं. २०७३ साल पुस २८ गते। बिहीबार। इश्वी सन् २०१७ जनवरी १२ तारिख। उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य)
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि तत्काल फाइदा उठाउन नसकिएला। अवसरका लागि जोखिमपूर्ण काममा जुट्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ला। तापनि मेहनतले विशेष अवसर दिलाउनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। व्यवसायमा पनि राम्रै धन आर्जन हुनेछ। अग्रजहरूको मार्गदर्शन लाभदायक रहनेछ।
बृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। मान-सम्मान प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक अभिव्यक्तिले ठूलो अवसर दिलाउन सक्छ। आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह हिम्मतले काम लिँदा चिताएको सफलता प्राप्त हुनेछ। प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धिले हौसला जगाउनेछ। इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै नयाँ कामको योजना अघि बढ्नेछ। परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिएला। प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो आफ्नै बेहोसीले नोक्सान पुर्याउला। सोखले फजुल खर्च बढाउन सक्छ। काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थितिसमेत आउन सक्छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। तापनि चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। टाढाका साथीभाइको निम्तो प्राप्त होला। समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ भने लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। प्रयत्न गर्दा महत्वपूर्ण वस्तु लाभ हुन सक्छ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो समयको तालमेल नमिल्दा काममा पछि परिनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा दु:ख पाइनेछ भने मेहनत गर्दा बिस्तारै प्रगति हुनेछ। व्यापारमा लाग्नेहरूलाई सामान्य फाइदा हुनेछ। रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ। कमजोरी बाहिर आउनाले नोकरी तथा राजनीतिमा मा समस्या पर्न सक्छ। तापनि भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते धेरैले मेहनतको तारिफ गर्नेछन्। शुभचिन्तकहरू प्रशस्तै फेला पर्नेछन्। चुनौतीहरू स्वत: हट्नेछन् भने कर्मयोग र आम्दानीले पछ्याउनेछन्। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। सामान्य मित्रता दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्छ। कामले अरूको मन लोभ्याउँदै दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। नसोचेको प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मानका साथ मित्रताको बन्धन कसिलो हुने समय छ। व्यवसायका लागि यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। सोख पूरा हुनुका साथै प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। नयाँ ज्ञानले अध्ययनमा उत्साह जगाउनेछ। सुमधुर प्रेम वा दाम्पत्यले प्रफुल्लित भइनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ भने विभिन्न भौतिक साधन प्राप्तिको योग छ।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन्। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीका माध्यमबाट चिताएको काम बन्नेछ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा लाभ हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ तथा आफन्त नजिकिन सक्छन्। भूमि तथा पशुधनबाट पनि फाइदा हुनेछ। बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला। स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ। परिवारमा आमाको माध्यमबाट काम बन्न सक्छ।
आरोप जे जस्तो भएता पनि गाँठी कुरो बरियताको फाल्गुण ६ गते काठमाडौं: २ दिन अगाडी पुर्व पन्चहरुको बाहुल्यता रहेको एकिकृत रास्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कमल थापालाई ...